Yako B2B Isu Inofanirwa Kusanganisira Ecommerce | Martech Zone
Wanga uchiziva here kuti takawedzera a shopu yemasevhisi paMartech? Isu hatisimudzire toni (zvakadaro) apo isu tichienderera mberi nekushomeka, asi isu tiri kuona akawanda uye akawanda makambani anongoda kumberi mitengo uye asingade kushanda zvakananga nechikwata chekutengesa kusaina chigadzirwa kana service. Ndosaka takavaka ichi chikamu chesaiti yedu uye tiri kuenderera nekuwedzera zvigadzirwa nemasevhisi - kubva kuongorora kune infographics.
Sezvo eCommerce uye omnichannel yekutenga zviitiko zvichikwira mukutonga muB2C, vanozove vakafanana nekutenga kwevatengi. Sezvo vatengi veB2B uye vashandi vekutenga zvinhu vari vatengi muhupenyu hwavo hwega, tarisiro yekudzidzisa, nyore-kufamba-dhijitari kutenga mapuratifomu inoshanda zvakaringana pakutenga ngarava nyowani dzemakambani mota sezvazvinoita kuodha shangu mbiri.
Isu takafanotaura bhizinesi rega rega raizove eCommerce bhizinesi… Asi hatisi toga! Accenture Inopindirana yakaongororwa yevakuru-chikamu dhijitari uye eCommerce nyanzvi kumasangano makuru eB2B kuti vanzwisise kuchinja kwemaonero ekutenga online.
Huwandu hwevatengi veB2B vanotenga zvinhu pamhepo zvinokwira kubva pa57% muna2013 kusvika pa68% muna2014.
86% yemasangano eB2B ikozvino anopa sarudzo dzekutenga pamhepo.
Chete 50% yemasangano eB2B anogamuchira zvinopfuura chegumi chemari yavo kubva pakutengesa kwepamhepo.
Imwe kiyi pane izvi yatakaona ndeyekuti vashanyi veB2B havadi kubhadhara kumberi vachishandisa kiredhiti kadhi kune izvi zvakakura zvekuita. Iri harisi dambudziko izvozvi nekuti isu takapa akawanda maitiro ekubhadhara, kusanganisira mavovovo.
Tags: Accentureb2bb2b ecommerceinfographicomnichannelkutengesa pamhepotengesa masevhisi online